Ilu 15 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Mmadụ na-akwụsị iwe iwe ma e wetuo obi zaa ya okwu (1)
Anya Jehova na-ahụ ihe niile (3)
Ekpere ndị ezi omume na-eme Chineke obi ụtọ (8)
Atụmatụ na-aghasasị ma a gbaghị izu (22)
Na-atụgharị uche tupu ị zaghachi
15 Mmadụ na-akwụsị iwe iwe ma e wetuo obi* zaa ya okwu,+Ma okwu ọjọọ* na-akpasu iwe.+ 2 Ndị ma ihe na-ekwu ihe dị mma ha ma,+Ma ndị iberiibe na-ekwu okwu nzuzu. 3 Anya Jehova na-ahụ ihe niile. Ọ na-ahụ ma ndị ọma ma ndị ọjọọ.+ 4 Okwu ọma na-eme ka mmadụ dị ndụ,*+Ma okwu ọjọọ na-agbawa obi. 5 Onye nzuzu na-elelị aka ná ntị nna ya na-adọ ya,+Ma onye ma ihe na-anabata ndụmọdụ.*+ 6 Akụ̀ na-eju n’ụlọ onye ezi omume,Ma ihe onye ajọ omume na-eme* na-akpatara ya nsogbu.+ 7 Ihe ndị ezi omume na-ekwu na-eme ka ndị mmadụ mụta ihe,+Ma obi ndị nzuzu adịghị otú ahụ.+ 8 Jehova kpọrọ àjà ndị ajọ omume na-achụ asị,+Ma ekpere ndị ezi omume na-ekpe na-eme ya obi ụtọ.+ 9 Jehova kpọrọ ihe onye ajọ omume na-eme asị,+Ma ọ hụrụ onye na-agba mbọ na-eme ezi omume n’anya.+ 10 Onye na-achọghị ịnọ n’ezigbo ụzọ na-ewere aka ná ntị a na-adọ ya ka ihe ọjọọ,*+Ma onye kpọrọ mba a na-abara ya asị ga-anwụ.+ 11 Ebe ọ bụ na Jehova na-ahụ ndị nọ n’ili* nakwa ebe ndị mmadụ na-anọ erekasị,*+O doro anya na ọ na-ahụ ihe dị ndị mmadụ n’obi.+ 12 Onye na-akwa mmadụ emo anaghị ahụ onye na-abara ya mba* n’anya.+ Ọ gaghị agakwuru ndị ma ihe ka ha dụọ ya ọdụ.+ 13 Ọ bụrụ na obi dị mmadụ mma, ihu na-abụ ya ọchị ọchị,Ma ike na-agwụ mmadụ ma ọ bụrụ na obi adịghị ya mma.+ 14 Onye na-aghọta ihe na-agba mbọ ka ọ mụta ihe,+Ma ihe juru ndị nzuzu ọnụ bụ okwu iberiibe.+ 15 Ụbọchị niile na-abụrụ onye na-ata ahụhụ* nsogbu nsogbu,+Ma onye obi na-adị mma na-enwe obi ụtọ mgbe niile.+ 16 Ọ ka mma mmadụ inwe obere ihe ma ya ana-atụ egwu Jehova+Kama mmadụ inweju akụnụba ma obi anaghị eru ya ala.*+ 17 Ọ ka mma na ndị mmadụ na-eri naanị akwụkwọ nri ma hụ ibe ha n’anya+Kama ịna-ata anụ ehi gbara agba ma kpọọ ibe ha asị.+ 18 Onye na-ewe iwe ọkụ na-akpata esemokwu,+Ma onye na-anaghị ewe iwe ọsọ ọsọ na-eme ka esemokwu bie.+ 19 Ogwu juru n’ụzọ onye umengwụ,*+Ma ụzọ ndị ezi omume dị ka okporo ụzọ dị larịị.+ 20 Nwa ma ihe na-eme nna ya obi ụtọ,+Ma onye nzuzu na-eleda nne ya anya.+ 21 Nzuzu na-atọ onye na-enweghị uche ụtọ,+Ma onye na-aghọta ihe na-eso ezigbo ụzọ.+ 22 Atụmatụ na-aghasasị ma ọ bụrụ na a gbaghị izu,Ma a na-arụpụta ezigbo ihe ma e nwee ọtụtụ ndị ndụmọdụ.+ 23 Mmadụ na-aṅụrị ọṅụ ma ọ zata ajụjụ,+Okwu e kwuru mgbe kwesịrị ekwesị na-adịkwa ezigbo mma.+ 24 Onye na-aghọta ihe na-aga n’ụzọ na-agbago agbago nke na-eduga ná ndụ.+ Ọ naghị abanye n’ụzọ na-agbada agbada nke na-eduga n’ili.*+ 25 Jehova ga-akwatu ụlọ ndị dị mpako,+Ma ọ ga-eme ka a ghara ịkpa ala nwaanyị di ya nwụrụ aka.+ 26 Jehova kpọrọ nkata onye ọjọọ na-akpa asị,+Ma okwu ọma na-adị ya mma.+ 27 Onye ji aghụghọ akpa akụ̀ na-akpatara ezinụlọ ya nsogbu,*+Ma onye kpọrọ ịnara aka azụ asị ga na-adị ndụ.+ 28 Onye ezi omume na-atụgharị uche tupu ya azaghachi,*+Ma ndị ajọ omume na-ekwupụsị okwu ọjọọ. 29 Jehova anaghị abịa ndị ajọ omume nso,Ma ọ na-anụ ekpere ndị ezi omume.+ 30 Ihu ọchị na-eme ka obi dị mmadụ ụtọ. Akụkọ dị mma na-eme ka mmadụ nwee ume.*+ 31 Onye na-anabata mba a na-abara yaNa-egosi na ọ ma ihe.+ 32 Onye ọ bụla nke na-anaghị anabata aka ná ntị a na-adọ ya kpọrọ ndụ ya asị,+Ma onye ọ bụla nke na-anabata mba a na-abara ya na-aghọta ihe.+ 33 Ọ bụrụ na mmadụ na-atụ egwu Jehova, ọ ga-amụta otú ọ ga-esi na-akpa àgwà ka onye ma ihe.+ Mmadụ ga-ebukwa ụzọ dị umeala n’obi tupu a kwanyere ya ùgwù.+
^ Ma ọ bụ “e jiri nwayọọ.”
^ Ma ọ bụ “okwu na-agbawa obi.”
^ Na Hibru, “bụ osisi nke ndụ.”
^ Ma ọ bụ “mba a na-abara ya.”
^ Ma ọ bụ “na-enweta.”
^ Ma ọ bụ “na-ewere aka ná ntị a na-adọ ya ka ịta ya nnukwu ahụhụ.”
^ Ma ọ bụ “n’Abadọn.”
^ Ma ọ bụ “onye na-adọ ya aka ná ntị.”
^ Ma ọ bụ “onye obi na-adịghị mma.”
^ Ma ọ bụ “ma nọrọ ná mgbagwoju anya.”
^ Ma ọ bụ “Ụzọ onye umengwụ dị ka ogige e ji osisi ogwu gbaa.”
^ Ma ọ bụ “na-emechu ezinụlọ ya ihu.”
^ Ma ọ bụ “na-echebara ihe ọ ga-aza ezigbo echiche; na-eche echiche tupu ya ekwuo okwu.”
^ Na Hibru, “na-eme ka ọkpụkpụ sie ike.”